Kabardinka - बच्चाको स्वास्थ्य पुन: प्रयोग र फुर्सत
अतिथि घरहरू र होटलहरू। केन्द्रीय समुद्र तटको छेउमा। होटल "Kyzmos", सुविधाहरू सहित कोठाहरू। बच्चाहरूको साथ पारिवारिक आवास - लक्जरी कोठा। व्यापक खाना: भोजन कोठा, क्याफे। साइटमा आउटडोर पोखरी।
<< p> बच्चाहरूको आराम र पुनःस्थापना - अवधारणाहरू, नजिकको अन्तराल। कारकहरू बच्चाको आध्यात्मिक र शारीरिक कल्याणलाई सीधा, उनको पछि तालिम र क्यारियर गतिविधिहरूमा प्रभाव पार्दै।
राम्रोता छुट्टीहरू बच्चाहरु मा स्वास्थ्य र रोग रोकथाम र उपयोगी सीप को गठन को लक्ष्य को एक सेट हो।
Ka> Ka> Ka> Ka> kabardinka रिसोर्ट गाउँ, धेरै संख्यामा बच्चाहरु संग मनोरन्जन को लागी आदर्श छ। नरम मौसम, दक्षिणी सूर्य, समुद्री, सफा हावा, समुद्री, र राहत वनस्पति - रिसोर्टको मुख्य मनोरञ्जनकारी स्रोतहरू छन्,
फुर्सत आराम को एक राज्य मात्र होइन (विशेष गरी एक pehere), तर मानसिक प्रदर्शन बढाउन को लागी एक अभिन्न हिस्सा, यो चलिरहेको को एक अभिन्न हिस्सा छ। खेलहरू, खुल्ला आरक्षणमा नुहाउने, प्रकृति, भ्रमण यात्रा, घोडाको सवारी, पानी मनोरन्जन, प्रदर्शन ग्यालरीहरू, प्रदर्शन ग्यालरीहरू।
बच्चाको लागि आराम गर्नु उसको व्यक्तित्व बन्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो। यो एक शक्तिशाली उर्जा ब्याट्री हो, जत्तिकै वर्षमा मोहित थियो, र अब पुनःपूर्तिको खाँचो पर्दछ। वरपरको नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न समय वातावरण, क्षितिजहरूको विस्तारकन, सुधार गरिएको स्वतन्त्रता।
बच्चाहरूसँग आराम गर्नुहोस् - बुकसिंग फारमको साथ आधिकारिक वेबसाइट, अन्तरारित बिना आवास 2021 वर्षसम्म आउँ। व्यक्तिगत छुटहरू!
हरेक 2021 मा आराम गर्ने रोज्दा हामी क्रासोडरको रिसोर्टमा ध्यान दिन सिफारिस गर्दछौं। Kabardianaa COMES BS को उत्तर-पश्चिम बैंकमा अवस्थित नभर्सोस गाउँ हो। गर्मीमा समुद्रले समात्ने कामले तपाईंलाई दक्षिणी प्रकृतिका सबै खुशीलाई पूरै आनन्द लिन अनुमति दिनेछ।
पुस्तक UL को लागी 1 आवास विकल्प। क्रान्तिकारी - 2100 रूबल 20221 मा मूल्य 2021 मा! वर्णन, फोटो र समीक्षा मद्दत चयन गर्नुहोस्। सडकमा एक मिनी होटल भाँडामा लिनुहोस्। क्राइड्लीमा क्रान्तिकारी क्राइम्प्रिनमा।
मिनी-होस्ट "पन्ना" कोबार्डिंक गाउँमा समुद्री किनारमा एक-मिनेट हिंड्नुहोस्। यसले एक पौडी खेल्ने पोखरी, नि: शुल्क वाई-फाई, एक पुस्तकालय, वातानुकूलित कोठा र सबै एक उत्कृष्ट रहनको लागि आवश्यक सबै चीज गर्दछ। कोठाहरू फायर अलार्म र इलेक्ट्रॉनिकको साथ सुसज्जित छन्।